အင်တာနက်ပေါ်ရှိစကားစုများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးပုံများ - Self-Help အရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ပုံတစ်ပုံကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်တယ် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဖော်ပြသောစကားစုပါသောသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်ဖွယ်စကားလုံးပါသောပုံရိပ်တစ်ခုရှိခြင်းသည်အထူးပုံတစ်ပုံပါနိုင်သမျှကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
လူအများစုအတွက်နားလည်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားသူများအတွက်မူပုံတစ်ပုံတည်းကသင့်အားလုံး ၀ ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ကြောင်းကိုကူညီပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှထူးဆန်းသည်ဖြစ်စေ၊ နေရာမယူပါစေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားသူများလည်းအတူတူပင်ခံစားနေရသည်။
ထိုအတွေ့အကြုံများကအရာရာတိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုနားလည်စေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောပြကြတယ် စာအုပ်များ၊ ပုံပြင်များ၊ ဘဝ၏အဓိကအခိုက်အတန့်နှင့်ပုံရိပ်အားဖြင့်ပင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသောအားကောင်းသောစကားစုများမှတဆင့်။ အရေးကြီးသည်မှာဤအရင်းအမြစ်များအားလုံးသည်အခြားသူများအတွက်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့အရင်းအမြစ်များဟုခေါ်သည်။
ဤကဏ္တွင်စာပိုဒ်တိုများ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအချို့ပုံများ၊ မိသားစုခံစားချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အခြားသူများသည်လူများအားရည်ရွယ်သောရုပ်ပုံများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုမှတဆင့်သူတို့၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်စေရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှာကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအခန်းရှိအကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုသင်ရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေပြီးဆိုလိုသည်မှာသင့်လက်၌ရှိသောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားချီးကျူးပါသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်နည်းပညာယခုအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုးရိုးအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ရွေးချယ်စရာများဒါအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်လူတစ်ယောက်အတွက်တော့လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုရှာရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သို့သော်ဒီနေရာတွင်ဒေါ်ရသီကိုမှော်အုန်းဇ်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သောအဝါရောင်အုတ်ကြွပ်များကဲ့သို့သင်လိုက်လျှောက်ရန်လွယ်ကူသောလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဤလမ်းကြောင်း၏အဆုံးသည်ဝတ္ထုထဲမှကဲ့သို့သောမှော်လောကမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် သင့်အတွက်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်အား ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိမေးခွန်းအားလုံး၏အဖြေများကိုရှာရန်သည်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ကမ္ဘာသည်နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ မှန်ကန်စွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပါကခက်ခဲသောအခြေအနေသို့လမ်းသစ်ကိုရောက်သွားနိုင်သည့်လက္ခဏာများ။
ဤအပိုင်းတွင်ပုံမှန်ပေါ်လာမည့်စကားစုများပါသောရုပ်ပုံများစွာတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးအစားအချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်၊ များစွာသောအရာများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်ဆုံးတွင်စကားစုများသည်အခြားသူများနှင့်အခြားသူများအားဝေမျှရန်ဆုံးဖြတ်ထားသောအတွေးများ၊ စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များသာဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝလေ့လာမှုကိုမျှဝေရမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့သာလျှင်ကျန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်လို့ပဲ။
စာပိုဒ်တိုများပါသည့်ပုံများသည်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သာမက၊ အထူးတစ်စုံတစ် ဦး ၏နေ့ကိုလင်းစေရန်သူတို့ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤခက်ခဲသောအချိန်များတွင်ကမ္ဘာကြီးအသက်ရှင်နေရခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် မည်သည့်အလတ်စားမှတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးမရှိမဖြစ်အရေးပါသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ခံစားမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူထုတ်ဖော်မရနိုငျကတည်းက။ သင်စဉ်းစားနေသောသူအားလှပသော၊ အထူးချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသောစကားစုဖြင့်ပုံတစ်ပုံကိုအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုကောင်းသောနည်းသည်။
စာပိုဒ်တိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပါ ဆန္ဒရှိသူမည်သူမဆို၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ဆင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သောစကားစုများပါ ၀ င်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပုံတစ်ပုံကိုသင်ကြည့်သောအခါတစ်ကြိမ်ထက်မကသင်သည်ပြုံးခြင်းသို့မဟုတ်သဘောတူခြင်းအမူအရာဖြင့်သင်အံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည်။
သင်၏အသက်တာကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် +20 လှုံ့ဆော်မှုပေးသောစကားစုများ
စာပိုဒ်တိုများ၏စွမ်းအားသည်အလွန်ကြီးမားသည်။ ဖျက်ဆီးတတ်သောစကားစုသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘဝကိုပျက်စီးစေပြီးသူတို့၏နေ့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
မေးခွန်းနံပါတ် ၁– မကြောက်လျှင်သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့ 10 အနှစ် .
ကျွန်ုပ်၏အဆိုပြုချက်ကိုမရှင်းပြမီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်ကိုရရှိစေလိုပါသည်။ ယနေ့ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ဖြစ်ပါသည်။